WAR CUSUB: Kaddib soo laabashadii Zidane kooxda Real Madrid oo durba la xiriirtay Chelsea – Gool FM
“Manchester United kama foga heerka Manchester City.” – Ole Gunnar Solskjær
Tababare Koeman oo ka jawaabay haddii uu Pique ciyaarayo kulanka habeen dambe ee Finalka Copa del Rey
Paul Pogba oo kala doortay midka fiican Ole Gunnar Solskjær iyo José Mourinho
Óscar Mingueza oo doortay midka fiican xiddigaha Kylian Mbappé iyo Vinícius Júnior
Real Madrid oo ku dhow inay qandaraaska u kordhiso mid ka mid ah xiddigaheeda ugu muhiimsan kooxda
Pochettino oo fariin u diray Real Madrid iyo Barcelona… (Muxuuse ka yiri kulanka PSG iyo Man City?)
Tababare Solskjær oo ka hadlay aragtidiisa ku aadan kulanka Man United iyo Roma ee semi-finalka Europa League
Muxuu Arteta ka yiri kaddib markii ay Arsenal u soo baxday semi-finalka UEFA Europa League?
Kooxaha Man United iyo Arsenal oo iska xaadiriyay wareega afar dhamaadka tartanka UEFA Europa League … +SAWIRRO
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Man United iyo Granada ee tartanka Europa League oo la shaaciyey
WAR CUSUB: Kaddib soo laabashadii Zidane kooxda Real Madrid oo durba la xiriirtay Chelsea
Haaruun March 12, 2019
(Madrid) 12 March 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ee dalka Spain ayaa la xiriirtay Eden Hazard wax yar kaddib magacabistii Zinedine Zidane sida wararku ay sheegayaan.
Tababaraha reer France ee Zidane ayaa taageere wayn u ah xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Chelsea ee Hazard, waxaana uu doonayaa inuu la soo saxiixdo dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Zizou ayaa sidoo kale lagu dhiirri-geliyay helitaanka Hazard markii uu saddexda jeer ku guuleystay koobka Horyaalladda Yurub ee Champions League, laacibka reer Belgium ayaana macallinkan ku tilmaamay mid uu ku daydo.
Labo sano ka hor isagoo Hazard la hadlayey Belgian TV channel ayuu yiri: “Qof walba waa uu garanayaa xushamadda aan u hayo Zidane ciyaaryahan ahaan, laakiin sidoo kale tababare ahaan, isagu waa mid aan ku daydo.”
“Ma garanayo waxa dhici doona mustaqbalka, si kastaba, hubaashii inaan ka hoos ciyaaro Zidane waxay noqon lahayd riyo.”
Hazard ayaa muddo dheer diiradda u saarnaa Los Blancos, isla markaana waxa uu diidan yahay inuu saxiixo qandaraas cusub oo kaliya waxa uu sheegay inuu doonayo inuu dhaqaaqo.
28-sano jirkaan ayaa hal sano oo qura uu kaga harsan yahay qandaraaskiisa haatan ee xagaaga, Jariiradda The Telegraph ayaana warinaysa in kooxda Real Madrid ay durbadiiba isku diyaarisay inay bixiso 100 milyan oo gini.
Sidoo kale Hazard ayaa kasban doona inuu todobaadkii jeebka ku shubto oo uu mushahar ahaan u qaato adduun dhan 300,000 oo kun oo gini.
Chelsea ayaa ka biyo diiddan inay lumiso xiddigeeda, balse waxay ka war haysaa inay bilaash ku waayi doonto bisha Janaayo ee sanadka 2020-ka.
Hazard ayaa la filayaa inuu si cad ugu sheego Blues inuu doonayo inuu tago suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Yeelkeede, ganaaxa suuqa laga saaray kooxda Chelsea ayaa la micno noqon kara inay Hazard ka hor istaagaan inuu kooxda ka tago, maxaa yeelay lama soo wareegi karaan badelkiisa.
Ogoow halka ay ku dambeeyaan Tababarayaashii kale ee ka soo hoos shaqeeyay Florentino Perez kaddib markii uu xalay soo celiyay Zidane.. + SAWIRRO
Ryan Giggs oo ku dhawaaqay xiddigaha uu kala qeyb galayo isreeb-reebka Euro 2020… (Miyuu ka maqan yahay Gareth Bale?)